KỌMPUTA ANAGHỊ AHỤ SSD: IHE KPATARA NA NGWỌTA - SSD - 2019
Ihe kpatara kọmputa ahụ anaghị ahụ SSD
Nke mbụ, netwọk mmekọrịta ọha na eze bụ VKontakte dị maka ikike nke ike ịkọrọ ndị ọrụ ndị ọzọ. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, mgbe ị kwusịrị nkwurịta okwu zuru oke maọbụ na ọ bụrụ na ọ kwụsịrị kpamkpam, ọtụtụ ederede na-enweghị isi na-achọ nwepụ bụ ikpokọta na ndepụta nke mkparịta ụka gị.
Ụdị, nke a. Netwọk anaghị enye ndị ọrụ ya ike ikpochapụ ozi. N'ihi nke a, n'ime usoro ịmepụta nsogbu ahụ, ọ ga-abụrịrị na ị ga-eji ntinye ndị ọzọ dị iche iche.
Anyị na-ehichapụ ozi VKontakte
Ọ bụrụ na ị nwere ike ihichapụ ozi niile site na ihe ọ bụla VKontakte dialog, ị ga-amara na ị nweghị ike ime nke a n'egbughị oge site na iji ngwaọrụ ọkọlọtọ. N'okwu a, usoro dum na-ebelata ọrụ nke otu ụdị.
Mmemme ndị ahịa nke na-achọ ka ị tinye aka na ndebanye aha, na-ekwe nkwa ịnye ike ịmepụ ozi niile ma ọ bụ mkparịta ụka, bụ aghụghọ!
Ruo ugbu a, e nwere ụzọ dị irè dị irè, bụ nke nwere ike ime ka nhichapu ozi. N'ọtụtụ, ọ na-agbada iji iji omenala omenala.
Anyị na-eji ngwaọrụ ọkọlọtọ
Nke mbụ, ọ bara uru iji tụlee ụzọ nke ihichapụ ozi VK.com site na ihe atụ nke iji ọrụ nhazi. Ya mere, nanị otu ihe achọrọ n'aka gị bụ ihe nchọgharị Ntanetị ọ bụla.
Site na isi menu nke VKontakte gaa mpaghara. "Ozi".
Na ndepụta nke mkparịta ụka na-arụ ọrụ, chọta ihe ịchọrọ ihichapụ.
Hụ mkparịta ụka ahụ achọrọ ma pịa cross nke na-egosi n'akụkụ aka nri ya na nkwụsị mma "Hichapụ".
Na window ngosi nke na-egosi, pịa "Hichapụ".
Omume ndị metụtara na mwepụ nke nkwupụta VKontakte site na iji ngwaọrụ ndị a na-arụ ọrụ agaghị emezigharị! Hichapụ naanị ma ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike na ị gaghịzi achọ akwụkwọ ozi.
Na mgbakwunye na ihe ekwuru, ị nwere ike ịgbakwunye na e nwekwara ụzọ ọzọ nke iwepụ.
Mepee mkparịta ụka ọ bụla na onye ịchọrọ ihichapụ.
Na n'elu panel na n'akụkụ aka nri nke aha njirimara, kpoo òké n'elu bọtịnụ ahụ "… ".
Na menu na-emepe, họrọ "Kọwaa ozi akụkọ ihe mere eme".
Kwenye omume ndị a site na ịpị bọtịnụ ahụ "Hichapụ" na windo meghere na ngosi.
Mgbe ịpịsịrị bọtịnụ a kapịrị ọnụ, a ga-ebugharị gị na saịtị na VKontakte dialogs.
N'okwu abụọ ahụ, a ga-ehichapụ mkparịta ụka ahụ. Otú ọ dị, enwere otu atụmatụ ebe a, nke egosipụtara n'eziokwu bụ na ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ ozi dị iche iche na ozi ehichapụrụ, naanị ụfọdụ n'ime ha ga-ehichapụ. Ya mere, ị ga-emeghachi omume niile ruo mgbe akwụkwọ ozi ga-apụ kpamkpam.
Taa, ọ bụ naanị otu ụzọ ị ga-esi ehichapụ ọ bụla dialogs ị họrọ.
Hichapụ ihe niile VK dialogs ozugbo
Usoro nke ihichapụ ozi niile dị na saịtị netwọk mmekọrịta mmadụ na saịtị VK.com na-egosi mkpochapụ nke mmekọrịta niile n'otu oge. Nke ahụ bụ, n'ime usoro ịme ihe omume ahụ, site na ngalaba "Ozi" mkparịta ụka niile na-arụsi ọrụ ike, gụnyere mkparịta ụka, ga-apụ kpamkpam.
Lezienụ anya, dị ka mgbanwe ọ bụla na ngalaba nke okwu ahụ adịghị edozi!
Iji kpochapụ ihe na-agwụ aghara ma ọ bụghị akwụkwọ ozi, anyị chọrọ ntinye ihe nchọgharị pụrụ iche, nke ndị mmepe onwe ha na-emepụta. Edebere ihe ndenye a maka ihe nchọgharị weebụ Google Chrome, nke ị ga-achọ ibudata ma wụnye.
Mepee ihe nchọgharị weebụ Google Chrome ma gaa na ụlọ ahịa weebụ Weebụ Chrome.
Jiri igbe ọchụchọ na n'akụkụ aka ekpe nke ibe ahụ ka ịchọta ndọtị na-enyere aka na VK.
Pịa bọtịnụ ahụ "Wụnye"iji tinye onye enyemaka VK na Google Chrome.
Kwenye na mgbakwunye nke tinye-na site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Wụnye ndọtị".
Mgbe ịchọta ihe ịga nke oma, a ga-ebugharị gị gaa na peeji nke nwere akwụkwọ kwesịrị ekwesị, nyochaa njirimara nke njirimara ngwa ahụ na njikọta na ọrụ ndị isi.
Mgbe i mechara nwụnye, i nwere ike ịga n'ihu na ịmepụta ngwa ahụ arụnyere.
Chọta akara ngosi nke ntinye arụnyere na n'elu Google Chrome ngwa ngwa ma pịa ya.
Na oghere mmepe emepe, pịa bọtịnụ ahụ. "Tinye akaụntụ".
Enwere ike ịtụkwasị ndọtị a obi, ebe ọ bụ na ọ naghị eji data gị, ma ejikọtara ya na enyemaka nke ọrụ VK pụrụ iche.
Ọ bụrụ na enweghị ikikere na VK.com, ị ga-abanye na iji akara ngosi, na-ekwe ka ngwa ahụ jiri ozi akaụntụ gị.
Ọ bụrụ na ịbanyeworị na netwọk mmekọrịta gị na VKontakte site na ihe nchọgharị weebụ a, mgbe ị pịa bọtịnụ ahụ ekwuru n'elu, redirect redirect ga-eme.
Ka o sina dị, ị ga-amụta banyere ikike ịga nke ọma na-ekele obere obere ngwá ọrụ.
Kpagharịa bọtịnụ ndọtị na Chrome toolbar wee pịa bọtịnụ ahụ. "Ntọala".
Pịgharịa site na peeji nke meghere na ntọala na ngọngọ ahụ. "Mkparịta ụka".
Tinye akà rà "Nkọwapụta Ngwa Ngwa".
A na-echekwa ntọala gị niile na ọnọdụ akpaka, na-enweghị mkpa ịpị bọtịnụ ọ bụla. Ya mere, ị nwere ike ịmepee ihu a ozugbo ị nyochachara igbe ahụ achọrọ.
Site na isi menu nke VKontakte gaa mpaghara "Ozi".
Lezie anya n'akụkụ aka nri nke ibe ahụ na iji akwụkwọ ozi.
Na igodo menu, pịa bọtịnụ ọhụrụ nke na-egosi. "Wepụ Dialogs".
Kwado omume gị site na ịpị na window nke meghere "Hichapụ".
Ịnwekwara ike ịtọ igbe nlele ahụ kwekọrọ na windo a ka ewee ehichapụ ndị ederede ndị ị meghere. N'okwu a, gụọ akwụkwọ ozi agaghị arụ ọrụ site na mgbakwunye a.
Nke a na - enye gị ohere iwepụ mkparịta ụka ebe ọ bụla ebe ozi na - agụghị agwakọta ngwa ngwa, ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, site na ndị spammers.
Chere ruo mgbe ngwụsị nke usoro nhichapụ, oge nke a kpebisiri ike n'otu n'otu dabere na ọnụ ọgụgụ ndị na-arụ ọrụ.
Mgbe ọrụ nke VK Helper extension, ndepụta nke ozi gị ga-ekpochapụ kpamkpam.
A na-atụ aro ka ị nwetaghachi akwụkwọ ozi iji kpochapụ ohere nke nhichapụ. Ọ bụrụ na, mgbe ị weghachitere ibe gị, a ka gosipụtara ndepụta na-adịghị ọcha, enwere ike iwere nsogbu ahụ edozi.
Mgbatị ahụ nwere onwe ya site na nchịkwa nke VKontakte, nke bụ ya kpatara enweghị nkwa na ọ ga-arụ ọrụ siri ike. Otú ọ dị, n'oge May 2017, usoro a bụ nanị ụzọ dị mma iji wepu mkparịta ụka niile n'enweghị ihe ọ bụla.
Ka ị na-agbaso ntụziaka niile edepụtara, echefula ịgụ ntuziaka ndị dị na usoro ịme ihe.